"भाषा बाँचे जाती बाँच्छ"
फाल्गुन २९, २०७५ मनु बिद्राेही
गजलकार जिविका अश्रु दुई दशक देखि साहित्यमा कलम चलाइरहनु भएको छ।स्कुल लेभल देखि नै कविता विधाबाट साहित्यमा प्रवेश गर्नु भएको हो ।औपचारिक रूपमा वि.सं २०५३श्रावण महिनाको अनुसन्धान साप्ताहिक पत्रीकामा कविता प्रकाशित भएपछि लाग्नु भएको हो।
साहित्यमा लाग्नुको प्रेरणाको स्रोत आफ्नो परिवारलाई मान्नुहुन्छ।उहाँले कविता ,गजल र मुक्तक लेख्नुहुन्छ ।सिकिममा गजल अभियन्ताको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ।हिन्दी साहित्य समिती संस्थाको संस्थापक सदस्य गरि छ सात वटा साहित्यिक संस्थामा आवद्ध हुनुहुन्छ ।राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरि एक दर्जन जति सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ।गजल सङ्ग्रह "अक्षर प्रेम"(२०७३)र संयुक्त गजल सङ्ग्रह "शब्द शिविर"(२०७४) प्रकाशित भइसकेको छ भने गजल सङ्ग्रह "भाडाका मलामी "को प्रकाशनको तयारीमा हुनुहुन्छ । उहाँसंग सारङ्गी न्यूजकर्मी मनु विद्राेहीले गरेकाे कुराकानी:
व्यक्ति अथवा समाजको हितमा लेखिएका कुनैपनि कलात्मक लेख, रचना, काव्य, आदिलाई नै साहित्य भनिन्छ । समाजमा सु-सन्देश,जागरुक गराउन साहित्य लेखिनुपर्ने हो । तर म आफ्नो आत्म सन्तुष्टिको लागि लेख्नेगर्छु ।
झन्डै दुई दशक पहिले र अहिलेको नेपाली साहित्यमा के भिन्नता देख्नु भएको छ ?अहिलेको नेपाली साहित्यको स्थितिबारे कत्तिको सकारात्मक हुनुहुन्छ ?
समय परिवर्तनशील छ । अझ दुई दशक लामो समयको अन्तरालमा धेरै परिवर्तन भएकोछ । हाम्रो समयमा अहिले जस्तो प्रविधिको विकास थिएन । कुनैपनि कामका लागि समय धेरै लाग्थ्यो । हामी गाउँमा जन्मेका कवि लेखकका लागि मञ्च पाउन गाह्रो थियो । पत्रिकामा रचना छपाउन पाउदा अत्यन्तै भाग्यमानी ठान्थ्यौँ । बा-आमापनि सकारात्मक सोच राखिदिनुहुन्नथ्यो । कविता, गजल लेख्दा कमाइ हुन्छ र ? भन्नुहुन्थ्यो । तर अहिले त्यस्तो छैन । प्रविधिले गर्दा अधिराज्य भरिका सबैसँग सम्बन्ध रहन्छ । काम चाडैँ हुन्छ । अवसर पाइन्छ । म दुई दशक बिचको समय आकाश र पाताल फरक भएको पाउछु ।
प्रविधिको तीव्र गतिले मानिसलाई र नेपाली साहित्यलाई छिटो अगाडि बढाएको महसुस भएकोछ । तर यस प्रविधिकै कारण कयौंँ असल स्रष्टा भने ओझेलमापनि परेको देखेको छु ।
मान्छे अहिले राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । यो नेपाली साहित्यको लागि र कुशल साहित्यकार जो सबैले चिन्छन र साहित्य अकादमीले चिन्दैन अर्थात सरकारले उनीहरुका लागि भने सोच्न बाध्य बन्नु परेकोछ । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रविधिले नेपाली साहित्यलाई मनग्य प्रभाव पारेको छ ।
पुरुष लेखक भन्दा महिला लेखकको संख्यामा कमी देखिनु र पुरुष लेखक भन्दा महिला लेखक पछाडी पर्नुको मुख्य कारण के होला ?
पुरुष स्वतन्त्र छन् । पुरुष सत्ता भएकै कारण उनीहरु निर्धक्क आफ्नो एउटा जिम्मेवारी सकेर अन्यकाम जस्तै राजनीति, साहित्य लेखन तर्फ लाग्न सक्छन् । तर महिलामा जिम्मेवारी पुरुषमा भन्दा बढी हुन्छ । घर, कार्यालय, बच्चा आदि घरको काम जो कहिले सकिँदैन र देखिदैनपनि सरकारले महिलाका लागि जती नै अधिकार दिएका कुरा गरेपनि अझैँसम्म छाउगोठ भत्किएका छैनन् ।
बोक्सी प्रथा हटेको छैन गाउँ गाउँमा गएर हेरौँ भने अझैँपनि मोटर गाडी नदेखेका आमा, दिदीबहिनीहरू भेटिन्छन भने अहिले हामीले के आश गर्नु समानताको ? हाम्रो समाजमा, हाम्रो मानषपटलमा जबसम्म पुरुष सत्ता हावी भैरहन्छ तवसम्म महिला लेखक अगाडि बड्न सक्दैनन् ।
हो मिडिया र सामाजिक संजालले दुईचार कविता लेख्नेलाई वरिष्ठ कवि बनाइदिएको छ यो दु:खको कुरा हो । जसलाई साहित्य के हो थाहा छैन उसैबाट साहित्यको विकासमा के आशा राख्ने ? राम्रो पक्ष ओझेल परेपछि कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने त आम मानिसले बुझेकै हुनुपर्छ ।
साहित्य समाजको ऐना मात्र हैन मार्गदर्शकपनि हो । समाजमा भएका विसंगति, अभाव, कुसंस्कारगरुलाई साहित्य सिर्जना मार्फत बाहिर ल्याएर त्यसमाथि चर्चा परिचर्चा गर्नाले आम मानिसमा चेतनाको विकास अवस्य हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
सर्वप्रथमत: सरकारले साहित्यकारलाई सम्मान स्वरुप परिचयपत्र बनाई अन्य कर्मचारी अथवा विद्यार्थीलाई झैं सरकारी स्तरमा केही छुट दिए केहि हदसम्म राहत महसुस हुनेथियो कि भन्ने लाग्छ। साथै सर्जकका लागि किताबको बजार ब्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गरिदिए अझैँ राम्रो हुनेथियो ।
भनिन्छ "भाषा बाँचे जाती बाँच्छ" । यो कटुसत्य हो झैंँ लाग्छ ।आगन्तुक शब्दहरू राखेपछि हाम्रा पछिल्ला पिंढीले कुन आफ्नो भाषा र कुन आगन्तुक छुट्याउन सक्दैनन् । शब्दकोषमा आगन्तुक शब्द नपाउदा आउने पुस्तालाई र नेपाली जाति माथी नै नराम्रो असर पर्न जान्छ ।
साहित्यको प्रायः जसो सबै विधा विवादित बनेको छ यस्तो अवस्थामा साहित्य क्षेत्रमा रुचि भएकाहरुलाई र साहित्य क्षेत्रमा रुचि हुन चाहनेहरुलाई तपाईको सुझाव के छ ?
सवादविवाद त भैरहन्छन एकले अर्कालाई, अर्काले अर्कालाई यो भएन त्यो भएन त भइरहन्छ किनकि एक घरका चार सन्तानको त विचार मिल्दैन भने करोडौँ मानिसको विचार मिल्ने त कुरै भएन। त्यसैले मानव के हो त्यतातिर ध्यान दिएर आफू अघि बढ्नु नै बुद्धिमत्ता मान्छु ।
अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएको र भन्न मन लागेको कुरा केही बाँकी छ ।
मेरा गनथनहरू पढिदिनु भएकोमा मेरा प्रिय, आदरणीय पाठकवर्गमा आभार ब्यक्त गर्दछु र साथै मेरा कुराहरू पाठक सामू पुर्याईदिनु भएकोमा यस मिडिया प्रति हार्दिक अाभारी छु ।
बुधवार, फाल्गुन २९, २०७५, ०२:०३:००